Mitambo, 19 Zvita 2013
China 19 Zvita 2013
Zvita 19, 2013
Hurumende Inoparura Bhajeti reMabhiriyoni Mana eMadhora
Gurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, vaparura bhajeti regore rinouya remabhiriyoni mana emadhora uye vati vanotarisira kuti hupfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitanhatu nechidimbu kubva muzana.
Dzimwe Nyanzvi Dzotambira Bhajeti raVaChinamasa
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzagutsikana nematurirwo aitwa bhajeti regore rinouya remari inodarika zvishoma mabhiriyoni mana negurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, vachiti riri kubata bata mapoka ehurumende anoda mari akawanda
Zvita 06, 2013
Gadziriro yeZimbabwe Warriors Yoshorwa neVamwe
Mhuri yenhabvu muZimbabwe haisi kufara nenzira iri kutorwa negadziriro yemakwikwi e 2014 African Nations Championships ayo achaitirwa muSouth Africa mwedzi unouya.
Zvita 04, 2013
Zimbabwe Warriors Yotambira muBarbourfields Stadium kuBulawayo
Chikwata chenyika che Zimbabwe Warriors chatanga neChitatu hupenyu hutsva mumusha wacho mutsva weBarbourfields Stadium kuBulawayo.
Mbudzi 29, 2013
Highlanders ne How Mine Zvotsvukisana muMbada Diamonds Cup neMugovera
KuBarbourfields Stadium kuchange kuchidaidzwa asingwanzi neMugovera apo Highlanders ichakweshana ne How Mine mumakwikwi eMbada Diamonds Cup.
Mbudzi 28, 2013
Mitambo yeNhabvu Yodzikira muHarare
Castle Lager Premier Soccer League yave nezvikwata zvishomanana zvinobva muHarare mushure mekubuda kweBlack Mambas, Monomotapa pamwe ne Motor Action zvichisiya zvikwata zvitatu chete zvemuHarare mumakwikwi egore rinouya.
Mbudzi 25, 2013
Vakawanda Vanoti Nhabvu Iri Kudzikira muZimbabwe
Kutora zvakare kweDynamos mukombe we Castle Lager Premier Soccer League gore rino kwava kuburitsa zvakare mibvunzo yakawanda panyaya yemamamiriro akaita nhabvu muZimbabwe.
Mbudzi 22, 2013
Shasha dzeNhabvu Dzosarudzwa neMugovera
Vanyori venhabvu, varidzi vepembe pamwe nevarairidzi venhabvu mangwana vari kusangana muHarare kuitira kuti vasarudze vatambi gumi nemumwe chete vakashura mare gore rino.
Mbudzi 21, 2013
Vagari muKariba Vofarira Kupinda kweZPC Munhabvu yePamusoro
Muguta reKariba mune mufaro unotyisa mushure mekupinda muCastle Lager Premier Soccer League kwechikwata chekambani yemagetsi, Zimbabwe Power Company, ZPC Kariba.
Mbudzi 19, 2013
Makwikwi eMutambo weRugby Otsviriridza Mukupera kweSvondo
Zvikwata zvisere zvemunyika zvinomirira Harare neBulawayo zviri kutarisirwa kukweshana pamakwikwi eSpar Summer Series achatambirwa kuHarare Sports Club nemusi weMugovera neSvondo
Mbudzi 15, 2013
Arigwa Adyiwa Pakati peHighlanders, Dynamos, Harare City neChicken Inn
Highlanders, iyo iri pamusoro nemapoinzi makumi mashanu neimwe, iri kusangana neHarare City, iyo ine mapoinzi makumi mashanu. Ukuwo Dynamos, iyo iri kutevera Bosso nemapoinzi makumi mashanu, iri kusangana neChicken Inn
Mbudzi 13, 2013
Highlanders Yotungamira Mumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League
Pamitambo ye Castle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi chikwata che Highlanders chakunda chikwata che Triangle United 1- 0 kunhandare yeBarbourfields.